Faalo: Xasuuq lagu xusay xaquuq kale By: Dhaayow – idalenews.com
Faalo: Xasuuq lagu xusay xaquuq kale By: Dhaayow
Iyaddoo wali dad badan oo Soomaaliyeed maskaxdoodda kasii dhexguuxeyso Xusuuqii ka dhacay aga-gaarka Hooyooyinka THE VILLAGE HOTEL sanadii hore isla bishan 20/9/2012 maalin Qamiis ah, qaraxyaddii arxandarada ahaa ee lagu xusuuqay dad badan oo rayid ah haba u badnaadeen wariyayaal ay ka mid ahaayeen C/sitaar Daahir Sabriye, Liibaan Cali Nuur, C/raxmaan Yaasiin, sidoo kale ku dhaawacmay Nuure Max’ed Cali, C/llaahi Max’ed Cali Suldaan, C/risaaq Shiine, Gentelman & waliba dad badan oo rayid ah.
Inta la xaqiijiyay sanadkaasi waxaa ku nafwaayay oo lagu xusuuqay ku dhowaad 20 ruux oo aan waxba galabsan, dhaawacana uu kor u dhaafay illaa iyo 47 afartan & todobo qofood.
Xasuuqaasi xanuun ka badnaa oo asxaab badan Soomaaliyeed wali loogu tiiraanyeysan yahay ayaa hadana Waxaa la yaab noqotay isla bishii sanadkaasi oo maalmo yar ka harsan tahay baroordiiqooddii hadana isla goobtii shallay oo ay taariiqda ku beegnayd 7/9/2013 in xusuuq si arxandaro ah dad rayid ah loogu laayay.
Waxba isma dhaamin labadooduba qaraxa koowaad marka uu dhacay dadkii shacabka ahaa markii ay soo kala carareen oo ay damacsanaayeen in ay gar gaar u fidiyaan ayaa waxaa dhacday in qof wax yaabaha qarxa ku miinaysnaa hadana dadkii dhexda u gallay oo uu mar jawiga badalay, waana kaasi kan dad ka badan ugu wax yeeloobeen oo ay ku xusuuqmeen tiarrada guud eek u dhimatayna waxaa la xaqiijiyay 18 halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 39 qofood oo.
waa arin si aad ah u taabanaysa qof walbo oo muwaadin Soomaaliyeed ah, waxaana aad uga xumaadday arday ka yimid iskuulkoodii oo ka mid ahaa dadkii shallay ku nafwaayay oo buugaagtooddii dhiig ka daadanayay hilbahooduna hadba meel laga soo qaaday.
Xarakada Al-Shabaab ayaa si cad u sheegatay iney ka dambeysay masuuliyada qaraxyaddaasi, Qoraal ka soo baxay Xafiiska warfaafinta Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay inay weerarada qaraxyada ah la beegsadeen halka loo yaqaano maqaayadda The Village ee ku taalla guriga hooyooyinka, halkaasoo xarun u ah wax ay ku tilmaameen Jawaasiista gudaha iyo kuwa caalamiga ah., laakiin marka aad is bar bar dhigto dadka ku xusuuqmay goobtaasi dhamaantood waxa ay wada
ahaayeen dad rayid ah, arday, dad meesha ku ganacsanayay, intaba INAALILAAHI WA INA ILAYHI RAAJICUUN.
Siyaasada is diidan ee ka jira caalamka waa wax jira laakiin waxaa reeban in Shacab rayid ah la xusuuqo waana jiri karaa mucaarad balse waxaa fiican in qolyaha siyaasadaha iskala soo horjeedda si toos ah loo beegsado.
Waxaa illaa hada dhagahayga kasii guuxaysa Hooyo Soomaaliyeed oo laba wiil oo ay dhashay oo iskuul usoo dirtay loo geeyay Maydadkooddii oo Cad Cad ah, islaantii illaa iminka Miirkeedii sax ma ahan oo waa ay Shook san tahay, markii aad booqato isbitaallada waawayn waxa ay indhahaagu qabanayaan wax damiirkaga u adkaysan Karin.
Waxaa jirtay oo aan Soo arkay wiil Kirishbooy ahaa oo Gawaarida BLka ah la shaqeyn jiray oo lugta kaga jarmay qaraxii shallay waxaana isbitaalka ku illaalinayay gabar uu dhowaan soo guursaday oo aad u yar taasoo aanan xitaa awoodin in ay hesho nolol maalmeedkeedii caadiga ahaa waayo ninka kaliya ay taqaanay ee nolosheedda ay ku tiitsanayd waa uu ka naafoobay xitaa cunaddiisa ayaa qal qiil ku jirta waqti xaadirkan.
Qoraal laguma soo koobi karo xusuuqii Xusuuqa lagu xusay waxaana illaahay ka rajaynayaa in umadda Xaqa dareensiiyo oo kuwa waxa xusuuqayana raxmadda Alle kusoo dajiyo si ay u dareemaan waxa ay geesanayaan.
W/D Asad Abukar Ali (Asad Dhayow) Email asaddhayow@gmail.com
Mashruuca “AADA DUGSIYADA” oo wax lagu barayo 3-milyan oo caruur ah – lacag la`aan (DAAWO VIDEO)
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb-galay furitaanka 2 Dakadood oo cusub oo maanta laga dhagax dhigay Djibouti